Vaovao - Fanazavana amin'ny an-tsipiriany momba ny fitaovana avo lenta ho an'ny famonjena rano toy ny robot famonjena mpamonjy rano lavitra, mpamonjy aina velona, ​​sns.
Fanazavana amin'ny an-tsipiriany momba ny fitaovana avo lenta ho an'ny famonjena rano toy ny robot mpamonjy rano lavitra, mpamono aina, sns.
Ny loza noho ny tondra-drano dia iray amin'ireo loza voajanahary lehibe indrindra eto amintsika. Miaraka amin'ny fivelaran'ny siansa sy ny haitao dia manana fanoherana bebe kokoa ny olona. Ny isan'ireo trano nianjera sy maty noho ny tondra-drano tany amin'ny fireneko dia tamin'ny ankapobeny dia nihena. Nanomboka tamin'ny 2011, ny isan'ny olona maty noho ny tondra-drano tao amin'ny fireneko dia latsaky ny 1.000, izay manaporofo ihany koa fa ny herin'ny tondra-drano dia mijanona tsy mitongilana.
Tamin'ny 22 Jona 2020, ny tanàna avaratry ny Tongzi County, Zunyi City, Faritany Guizhou dia niaina oram-be avy amin'ny faritra. Avy ny oram-be tao amin'ny tanàn-dehibe 3. Ny oram-batravatra dia nahatonga ny tanàna isan-karazany tao amin'ny Fanjakan'i Tongzi mba hiharan'ny ambaratonga samihafa. Raha ny fanadihadiana sy statistika savaranonando dia olona 3 no maty ary 1 no naratra vokatry ny fianjeran'ny trano vokatry ny tondra-drano. Olona 10 513 no nafindra haingana ary olona 4.127 no mila fanampiana vonjy maika. Ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny fanelingelenana tamin'ny alalàn'ny tambajotram-pifandraisana any amin'ny tanàna sy tanàna sasany dia niteraka fatiantoka mivantana 82.89 tapitrisa yuan.
Ny famonjena rano dia tetik'asa famonjena miaraka amin'ny tampoka tampoka, fotoana tery, takiana teknika avo lenta, fahasarotana amin'ny famonjena be ary risika be. Rehefa miditra lalina ao anaty rano ny mpamonjy voina hamonjy olona, ​​dia atahorana izy ireo ary mety hamoy ny fotoana mety indrindra hanavotana olona. Tsy misy famantarana miharihary amin'ny fianjeran'ny rano. Matetika izy ireo dia mila mitady any amin'ny faritra midadasika mandritra ny fotoana maharitra mba hahitana ilay maty an-drano. Ireo antony ireo dia mampitombo ny sakana amin'ny famonjena amin'ny rano.
Androany, misy karazana fitaovana fanavotana rano marobe eny an-tsena, miaraka amina asa be pitsiny sy vidiny lafo. Na izany aza, dia mbola misy lesoka ihany tsy mbola resy. Ireto misy sasany amin'ireo olan'ny fitaovana famonjena rano:
1. Mety hisosona ireo fitaovana famonjena rano natsipy tao anaty rano avy amina sambo, morontsiraka na fiaramanidina. Ny fitaovam-panavotana rano sasany dia tsy manana fiasan'ny mitodika ho azy eo aloha, izay manemotra ny asa famonjena. Ankoatr'izay, ny fahaizana manohitra ny rivotra sy ny onja dia tsy tsara. Raha sendra onja mihoatra ny roa metatra ianao dia halaina sary ao anaty rano ireo fitaovana mamonjy aina, izay mety hiteraka famoizana ain'olona sy fananana.
2. Rehefa manao famonjena rano dia azo inoana fa ny zavatra avy any ivelany toy ny zavamaniry rano, fako plastika sns ... dia mety hanintona ireo olona voafandrika na fitaovana mamonjy aina. Ireo propeller an'ny fitaovana sasany dia tsy mampiasa fonony miaro manokana, izay tsy afaka manakana ireo zavatra vahiny tsy hiditra amin'ny volon'olombelona, ​​izay hampitombo ny zava-miafina miafina amin'ny asa famonjena.
3. Raha jerena ny mampiavaka azy manokana, ny akanjo famonjena rano efa misy dia manana fiononana malemy sy malefaka, ary ny lohalika sy ny kiho dia tsy manamafy, izay mahatonga ny fiarovana azy ireo sy ny fahamoranany azo malemy. Ny tampon'ny zipper dia tsy misy velcro hanamboarana ny zipper, izay mora miposaka rehefa miasa ao anaty rano ny zipper. Mandritra izany fotoana izany, ny zipper dia tsy manana paosy zipper, izay sarotra hitafy.
Robot fanaraha-maso lavitra ny famonjena rano
Sambo fikarohana sy mpamonjy voina tsy misy olona ROV-48 dia robot fikarohana kely, miasa lavitra, ambany rano sy hanavotra ho an'ny afo. Ampiasaina manokana izy io ho famonjena rano amin'ny fitoeram-bokatra, renirano, morontsiraka, sambo, tondra-drano ary toerana hafa.
Paramètre fampisehoana ankapobeny
1. Halavirana fifandraisana faran'izay betsaka: ≥2500m
2. Hafainganam-pandeha farany ambony: ≥45km / h
Wireless Remote Control Wireless Lifebuoy
Ny lifebuoy herinaratra fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby dia robot manafaka ambony ambany izay azo alefa lavitra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny dobo filomanosana, fitoeran-drano, renirano, morontsiraka, yachts, sambo, tondra-drano ary toerana hafa ho an'ny famonjena rano latsaka.
1. refy: 101 * 89 * 17cm
2. lanja: 12Kg
3. fahafaha-manafaka: 200Kg
4. Ny halaviran'ny serasera farany ambony dia 1000m
5. Hafainganana tsy misy enta-mavesatra: 6m / s
6. hafainganam-pandehan'ny olona: 2m / s
7. Fotoana fiaretana haingam-pandeha: 45min
8. Halavirana fanaraha-maso lavitra: 1.2Km
9. Fotoana fiasana 30min
1. Ny akorandriaka dia vita amin'ny fitaovana LLDPE miaraka amin'ny fanoherana tsara, ny insulation elektrika, ny hamafin'ny hatsiaka ary ny fanoherana mangatsiaka.
2. Fanavotana haingana mandritra ny dia manontolo: Hafainganana tsy misy enta-mavesatra: 6m / s; Haingam-pahefana (80Kg): 2m / s.
3. Izy io dia mandray fanaraha-maso lavitra karazana basy, izay azo ampiasaina amin'ny tanana iray, mora ampiasaina, ary afaka mifehy tsara ny herin'aratra.
4. Fantaro ny fanaraha-maso lavitra lavitra lavitra mihoatra ny 1.2Km.
5. Tohano ny rafitra fametrahana GPS, fametrahana toerana tena izy, fametrahana toerana haingana sy marina kokoa.
6. Tohano ny famerenana mandeha ho azy ny lakilen'ny fanalahidy mandeha ho azy ary avereno mody any an-trano ankoatry ny isany.
7. Izy io dia manohana ny familiana amin'ny lafiny roa ary afaka mamonjy amin'ny rivotra sy onja mahery.
8. Manohana ny fanitsiana an-tsaina ny lalana izy io, ary ny fandidiana dia mazava kokoa.
9. Fomba fampiroboroboana: noraisina ny propeller propeller, ary latsaky ny 1 metatra ny tadin'ny fihodinana.
10. Amin'ny fampiasana bateria lithium, ny fiaretana haingam-pandeha ambany dia mihoatra ny 45min.
11. Fiasa fanairana bateria ambany mifangaro.
12. Ireo jiro fampitandremana fampidirana hazavana avo lenta dia afaka mahatsapa mora foana ny fametrahana toerana amin'ny alina na amin'ny toetr'andro ratsy.
13. Sorohy ny ratra faharoa: ny tadim-piarovana manohitra ny fifandonana dia manakana ny fahasimban'ny vatan'olombelona mandritra ny fizotran'ny fandrosoana.
14. Fampiasana vonjy maika: baoty fanalahidy 1, kitso haingana, vonona hampiasaina rehefa latsaka ao anaty rano.